KDEApps6: Ngwa KDE Community in Field Multimedia | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 26/09/2021 06:00 | Aplicaciones, GNU / Linux
Na nke a nke isii «((KDEApps6) » site n'usoro isiokwu dị na "Ngwa KDE Community", anyị ga -eleba anya na ngwa nke multimedia n'ọhịa, nke bara ezigbo uru maka ijikwa faịlụ site na onyonyo / foto, ụda / ọdịyo na vidiyo.
Maka ndị nwere mmasị inyocha 5 anyị gara aga mbipụta ndị metụtara isiokwu ahụ, ị nwere ike pịa njikọ ndị a, ka ị gụchara akwụkwọ a:
1 KDEApps6: Ngwa mgbasa ozi ga -arụ ọrụ
1.1 Multimedia - Ngwa KDE (KDEApps6)
KDEApps6: Ngwa mgbasa ozi ga -arụ ọrụ
Multimedia - Ngwa KDE (KDEApps6)
Na ambit a multimedia, na "Obodo KDE" amalitela n'ihu ọha Ngwa 15 nke anyị ga -ekwu maka ya na ịza ajụjụ ya, n'ụzọ ederede na nkenke, 10 mbụ, mgbe ahụ anyị ga -ekwupụta 5 ndị fọdụrụ:
AudioTube: Ngwa nwere ike chọọ egwu YouTube, depụta ọba na ndị na -ese ihe, kpọọ listi ọkpụkpọ ewepụtara, ọba ma nye gị ohere ịmepụta listi ọkpụkpọ nke gị.
Ụlọ Plasma: Ngwa igwefoto maka Plasma Mobile. Ọ na -enye ohere mkpebi dị iche iche, ụdị nguzozi ọcha dị iche iche, na ịgbanye n'etiti ngwaọrụ igwefoto dị iche iche.
Egwuregwu Dragọn: Onye ọkpụkpọ mgbasa ozi lekwasịrị anya n'ịdị mfe karịa atụmatụ. Ọ na -eme otu ihe, yana naanị otu ihe: kpọọ faịlụ mgbasa ozi. Emebere interface ya dị mfe ka ọ banye n'ụzọ gị, mana iji nyere gị aka igwu faịlụ mgbasa ozi n'ụzọ dị mfe.
Elisa: Ngwa egwu dị mfe nke kwesịrị ịdị mfe iji. Ịchọghị nhazi ọ bụla tupu ịnwere ike iji ya.
JuK: Ngwa jukebox ọdịyo, nke na -akwado nchịkọta nke MP3, Ogg Vorbis na faịlụ FLAC. Ọ na -enye gị ohere idezi mkpado faịlụ ọdịyo gị, ma jikwaa mkpokọta na listi ọkpụkpọ gị. Isi ọrụ ya, n'eziokwu, bụ ijikwa egwu.
K3b: Ngwa maka ijikwa ndekọ CD bara ọgaranya na arụ ọrụ yana dị mfe iji. Ọ nwere akụkụ atọ: ọrụ mgbasa ozi na-emetụta gburugburu, ngwaọrụ na omume.
Kaffeine: Onye ọkpụkpọ mgbasa ozi nke dị iche na nke ndị ọzọ n'ihi ezigbo arụmọrụ dijitalụ TV (DVB). Ọzọkwa, ọ nwere interface enyi na enyi.
Kamoso: Mmemme dị mfe na enyi iji kamera weebụ gị. Jiri ya weghara onyogho na mee vidiyo ịkekọrịta.
Kdenlive: Onye nchịkọta akụkọ vidiyo na-abụghị ahịrị. Ọ dabere na akụrụngwa MLT ma na -anabata ọtụtụ usoro ọdịyo na vidiyo, na -enye gị ohere itinye mmetụta, ntụgharị na hazie vidiyo ikpeazụ n'ụdị a chọrọ.
Nwa 3: Onye nchịkọta mkpado ụda, nke nwere ike idezi mkpado na MP3, Ogg / Vorbis, DSF, FLAC, Opus, MPC, APE, MP4 / AAC, MP2, Speex, TrueAudio, WavPack, WMA, WAV, AIFF na tracker faịlụ.
Ngwa ndị ọzọ etolitere na nke a mgbasa ozi ọtụtụ mgbasa ozi site na "Obodo KDE" bụ:
KMix: Onye na -agwakọta ụda.
KMPlayer: Onye mgbasa ozi mgbasa ozi.
Kwave: Onye nchịkọta akụkọ ụda.
PlasmaTube: Onye na -ekiri vidiyo YouTube.
Vvave: Onye ọkpụkpọ ụda.
Na mkpokọta, anyị na -achọ nke a ndezigharị nke isii "(KDEApps6)" nke ngwa ukara dị adị nke "Obodo KDE", nke anyị na -agwa ndị nke multimedia n'ọhịa, abụwo ihe na -atọ ụtọ ma baa uru maka ọtụtụ. Na -ejekwa ozi maka mgbasa ozi na itinye ụfọdụ n'ime ndị a n'ọrụ ngwa ọdịnala banyere dị iche iche GNU / Linux nkesa. Nke a, n'aka nke ya, na -atụnye ụtụ n'iji oke na ike dị egwu ngwanrọ software lee ka o si maa mma ma na -arụsi ọrụ ike Obodo Linuxera na -enye anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDEApps6: Ngwa KDE Community na Ubi Multimedia
Linux Foundation na Microsoft na -arụkọ ọrụ ọnụ iji mebie okporo ọkụ eletrik